Fanaintainan'ny alika amin'ny alika: soritr'aretina sy fitsaboana | Tontolo alika
Fanaintainan'ny alika ny vavony
Encarni Arcoya | | aretina
Mahalala inona no dikan'ny marary vavony amin'ny alika dia zava-dehibe izany, satria izy roa dia mety ho tsy fihinanan-kanina tsotra sy aretina lehibe kokoa izay mila fitsaboana. Ny fanaintainan'ny vavony dia mitondra soritr'aretina maro hafa koa, toy ny mandoa na mivalana, izay mety hampihena ny alika.
Raha te hifehy ny fahasalaman'ny alika isika dia tsy maintsy jerentsika izany fanaintainan'ny vavony izany aretina mahazatra io ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy dia matotra izy ioSaingy misy aretina sasany tokony hotandremana. Na ahoana na ahoana, raha misy fisalasalana, dia tsy maintsy manatona mpitsabo biby haingana araka izay tratra isika hamantarana ny anton'io fanaintainana ao amin'ny vavonin'ilay alika io.
1 Ny fomba ahitan'ny alika ny fanaintainan'ny vavony
1.1 Tsy fihinanan-kanina ao anaty alika
1.2 Parasites amin'ny vavony
1.3 Mivadika vavony
2 Inona no hatao raha marary ny vavoniko ny alikako
2.1 Fampisehoana voalohany
2.2 Raha tsy mihatsara ...
3 Fanafody an-trano noho ny fanaintainan'ny vavonin-kaninina
3.1 Aza manome azy na inona na inona
3.2 Sakafo manokana
3.3 Aloe vera hosotroina
4 Torohevitra hialana amin'ny fanaintainan'ny vavony
Ny fomba ahitan'ny alika ny fanaintainan'ny vavony
Tsy afaka miteny ny alika hilaza amintsika fa marary ny vavony ary tsy salama izy ireo. Indraindray io fanaintainana io dia tsy mora hitan'ny tompony, indrindra raha alikany voalohany izy ireo ary tsy fantany ny fomba fihetsiky ny biby fiompin'izy ireo. Ny zavatra mahazatra indrindra rehefa misy aretina na tsy mahazo aina ny alika dia ny fianjerany, tsy milalao sy matory izy na mandry mihoatra ny mahazatra. Io tsy firaikana io dia mahazatra amin'ny aretina maro, noho izany dia mila mandeha lavitra kokoa foana ianao. Raha ny fanaintainan'ny vavony dia tsy maintsy tsapantsika sy potserintsika kely io ampahany io. Raha mirehitra ny vavony na inona na inona antony dia hitaraina na hivily ny alika. Etsy ankilany, ny tena fahita amin'ny fanaintainan'ny vavony dia mandoa sy mivalana, satria ny aretina dia misy fiantraikany amin'ny rafitra fandevonan-kanina rehetra an'ny alika. Na dia tsy mahafinaritra aza izany dia tsy maintsy manara-maso foana ny tain'ilay alika isika, satria azontsika tsoahina avy amin'izy ireo raha salama tsara izany. Ny alokaloka tsy ara-dalàna, tena maizina na mazava be, na tsy fitovizan-kevitra mihazakazaka dia manondro fa misy zavatra tsy mety.
Tsy fihinanan-kanina ao anaty alika
Ny iray amin'ireo olana fahita matetika miteraka fanaintainan'ny vavony dia ny tsy fihinanan-kanina. Satria mety hitranga amintsika rehetra izany, misy ny sakafo izay tsy mahasoa antsika ary ny alika dia mihinana zavatra be dia be izay tsy mifanaraka amin'izy ireo, izay miafara amin'ny aretim-bavony. Ny fomba hialana amin'izany dia ny manome azy sakafo mitovy foana, mba zatra ny kibony, ary koa tsy maintsy manome vola ampy anao izahay. Ny fety lehibe dia mitondra tsy fahatomombanana ary vavony mavesatra koa, koa tokony hialantsika izy ireo. Tokony ho takatra fa mirona hihinana kely kokoa noho ny antsika ilay alika, ka tsy tokony hanome sakafo be loatra azy io mihitsy. Ankoatr'izay, raha manova tampoka ny sakafony isika, manomboka amin'ny sakafo ho an'ny sakafo voajanahary, dia ara-dalàna ny fijalian'ny vavony mandritra ny andro vitsivitsy mandra-pahazony ny sakafo vaovao. Amin'ireo tranga rehetra ireo dia tsy mila taitaitra. Ny alika dia hiala sasatra sy hifady hanina mandritra ny ora vitsivitsy mandra-pahatongan'ny fahazotoan-komana indray dia ampy. Mazava ho azy fa tokony ho maivana ny fihinanana manaraka anao, mba tsy hampihoatra ny vavony izay marefo ihany. Raha miresaka amin'ny mpitsabo biby antsika isika dia afaka manome zavatra hampitony ny kibony mihitsy aza izy.
Parasites amin'ny vavony
Matetika ny alika no mifindra parasy, indrindra raha manana fahazarana mihinana kotoran'ny alika hafa izy ireo, izay mety voaloto. Ireo katsentsitra ireo mamorona fivontosana ao amin'ny vavony mivalana sy mandoa. Mba tsy hanjary olana io dia tsy maintsy mitazona ny alika hatrany isika. Ny fomba hanaovana izany dia amin'ny fanomezana pilina omorm ao anatiny, izay amidy amin'ny mpitsabo biby. Afaka manome hevitra antsika izy ireo amin'ny fotoana tokony hanomezantsika azy ireo azy. Amin'ny alika kely dia tsy maintsy atao alohan'ny manomboka manome vaksiny, satria ireo katsentsitra nifanarahan'izy ireo ireo dia mety hampihena azy ireo. Zava-dehibe ny hamoahana azy ireo haingana rehefa efa hitantsika ny kankana ao amin'ny fivondronany, satria midika izany fa betsaka izy ireo, satria niparitaka nanerana ny tsinay.
Raha misy ny olana izay tsy maintsy hialantsika amin'ny vidiny rehetra dia ny torsion amin'ny vavony. Ny aretin-kibo dia mety hitarika an'io, izay mitranga rehefa ny kibo mivadika ho kenda. Aretina tsy maintsy arahana eo noho eo io, satria mety hitarika ho amin'ny fahafatesan'ny alika ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy dia matetika loatra no mitranga fa misy ny azo atao, koa raha sendra marary kibo toa miharatsy dia tsara kokoa ny manatona mpitsabo biby mba hijerena ny biby fiompinay. Ho fanampin'izany, ny torsion amin'ny vavony dia azo sorohina amin'ny ankapobeny raha manome sakafo alika kely isika, satria misy sakafo be dia be ny torsion. Izany no antony tsara kokoa hatrany ny mampihinana ny alika imbetsaka isan'andro fa tsy be loatra, satria hipetraka tsara kokoa izy io ary hialantsika ireo risika tsy ilaina.
Inona no hatao raha marary ny vavoniko ny alikako
Tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo toe-javatra ratsy indrindra azonao aleha amin'ny alikanao dia ny fahitana fa marary izy. Ny tsy ahafahan'izy ireo miteny dia midika izany, raha tsy izany ianao mihaino ny fihetsiky ny biby, aza mahatsapa fa misy zavatra tsy mety.
Ny fanaintainan'ny vavony dia matetika miteraka, toy ny fihetsika voalohany, mampiato ny sakafo. Tena famantarana miharihary izany satria, na dia misy fotoana mety tsy te-hihinana aza ny alika dia tsy mahazatra izany ary mampitandrina anao izy fa misy zavatra tsy mety.
Ny kivy, tsy te hilalao, tsy te hiala ny trano, na mitomany na mimenomenona, na tsy mamela anao hikasika ny faritry ny kibo, dia fanehoan-kevitra hafa mety hitranga amin'ny alikanao rehefa marary kibo izy (na olana hafa) .
Fa inona no hatao amin'ireo toe-javatra ireo? Izahay dia nizara azy roa:
Ny hetsika voalohany rehefa tsikaritranao fa misy zavatra mitranga amin'ny alikao dia ny mandany fotoana miaraka aminy ary mijery izay mety hitranga aminy. Ny tiako holazaina dia jereo. Zava-dehibe izany jereo raha vavony ny olana sa avy amin'ny zavatra hafa.
Raha tsy te hihinana izy dia andramo atolotra azy zavatra tiany. Ny zavatra mahazatra dia ny biby mihinana azy, ary mitady bebe kokoa. Fa raha hitanao fa raisiny an-tsitrapo izany, mila fotoana hihinanana azy ary tsy hitanao koa ny fanatsarana ny fihetsiny, misy zavatra tsy mety.
Amin'ny ankapobeny, ny sakafo malemy dia tokony hanasitrana anao, saingy misy fotoana ilana olona matihanina hanombanana ny tranga misy anao. Noho izany, raha aorian'ny 2-3 andro, tsy hitan'ny biby fa mihatsara izy io, ny tokony hataonao dia izao manaraka izao.
Raha tsy mihatsara ...
Andro maromaro no lasa ary ny alikanao dia tsy miova. Na efa hitanao fa, anisan'ireo soritr'aretina misy azy, misy ny manaitra anao (toy ny mandoa rà, na seza mihosin-dra, fa mahatsikaritra azy ianao, tsy mifoha izy ...).
Aza taitra fa tonga ny fotoana handehanana any amin'ny mpitsabo. Any, ilay matihanina dia hikarakara ny fanaovana fitsapana haingana hahitana izay mety hitranga aminao. Ary inona no porofo manamarina izany? Ny zavatra voalohany, hikasika ny ampahany amin'ny kibo mba hahitana raha marina ny zava-drehetra. Ohatra, mivonto ny kibonao ary mafy be.
Mety hanana a fitsapana ho an'ny katsentsitra anatiny. Izany dia mora atao amin'ny swab landihazo natsofoka tao amin'ny faritra anal satria toy izany no ahitan'izy ireo raha misy kankana kely. Amin'ny ankapobeny dia hita eo amin'ny seza izy ireo. Raha izany dia tsy maintsy mihinana fanafody manafoana izany olana izany ianao (ary manala ny fanaintainan'ny vavony).
Ity manaraka ity dia mety ho fitsapana ra. Misy karazany roa, iray haingana izay ahazoana ny valiny ao anatin'ny 5-10 minitra fotsiny, ary iray hafa izay maharitra 1-2 andro vao tonga.
Safidy iray hafa ny fanaovana fitarafana, hahitana raha misy olana lehibe hafa.
Izany rehetra izany dia miankina amin'ny soritr'aretina sy ny antony nahatonga ny alikanao nankany amin'ny mpitsabo biby, ka tadidio izay zava-nitranga rehetra ka nandehananao nanontany.
Fanafody an-trano noho ny fanaintainan'ny vavonin-kaninina
Ankoatra ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana izay misy noho ny fanaintainan'ny vavonin'alika dia misy ihany koa ny fanafody ao an-trano azonao andramana Mba hanamaivanana ny namanao akaiky indrindra.
Manolotra ny sasany amin'izy ireo izahay fa azo antoka fa ho mora ampiasaina ary amin'ny fanandramana azy ireo dia tsy hamoy na inona na inona ianao fa hanamaivana kely ny biby fiompinao.
Ireto manaraka ireto:
Aza manome azy na inona na inona
Andro iray fifadian-kanina amin'ny kaninina dia tsy misy zavatra mitranga. Raha ny marina, rehefa manana olana amin'ny vavony isika, ny zavatra voalohany lazain'ny dokotera dia ny tsy mihinana na inona na inona fa ny serum mandritra ny 24 ora. Ary io zavatra io ihany no azonao atao amin'ny alikanao.
Ny tiako holazaina dia aza omena sakafo izy fa eny manome rano, raha afaka miaraka amin'ny serum izy, ka hidiran'ny rano.
Ny iray amin'ireo vahaolana an-trano izay azonao andramana dia ny manome azy sakafo manokana manampy ny fandevonan-kanina (ary koa tsy mavesatra na tsy mahatsiaro ho ratsy). Manana safidy maromaro ianao, ary dia hiankina amin'izay efa zakan'ny alika io, satria tsy zakan'izy ireo izany indraindray. Fa, ohatra, manana karaoty, tantely, flakes oat, voatavo, tratra akoho, vorontsiloza, trondro fotsy ...
Ny sasany amin'ireto sakafo ireto dia tsy maintsy andrahoina na andrahoina, ankoatry ny famakiana azy ireo ho ampahany kely hohanin'izy ireo.
Safidy iray hafa koa ny vary fotsy (ny lasopy vary fotsy misy karaoty dia tsy hevitra ratsy). Ny olana dia, raha voafatotra ianao, tsy io no tsara indrindra.
Aloe vera hosotroina
Araka ny fantatrao, eny an-tsena efa misy alika vera sotroina hosotroina. Amidy sy atolotra ireo, ohatra, ohatra, mba handray satrony na roa amin'ny vavony foana ary avy eo, raha tianao dia avereno mandritra ny andro ny fisotroana (misy olona misotro azy manontolo ao anatin'ny andro vitsivitsy).
Tokony ho fantatrao izany Ny aloe vera dia manampy, ary betsaka, hanatsara ny fahasalamanao. Hanombohana azy dia manatsara ny metabolisma sy ny fandevonan-kanina anao, mampitony ny fivontosana, manampy amin'ny gastritis, tsy dia may ianao ... Ary ahoana ny amin'ny alikanao izay marary kibo? Eny, afaka manampy anao koa izy io.
Ho azy hisotro azy dia misy safidy roa: na manampy kely ny rano sotroiny ianao, na raha tiany dia omenao azy mivantana. Miresaka zavamaniry voajanahary isika, ka tsy tokony haratra izany.
Ny fitondran-tena iray izay ananan'ny alika maro, ary mety efa hitanao matetika, dia ny fitadiavana ahitra sy fihinanana azy ireo. To, rehefa afaka kelikely, manomboka mandoa. Betsaka no mibedy azy ireo, na tsy te hanao an'izany, ary izany no tena tsara indrindra vitany satria manasitrana ny tenany izy ireo.
Eny ny Ny fihinanana anana dia manampy azy ireo hamoaka izay mahatonga azy ireo hanaintaina, ary ataon'izy ireo izany satria io no rafitra fiarovany an'io olana io. Ka mety fomba iray hanampiana anao izany.
Mba hanaovana izany dia mila mahazo anana ianao. Ohatra, manana catmint ianao (na antsoina hoe catnip), fa manampy koa ny aneta, basil, fennel ... Azonao atao ny manatona ny mpitsabo biby ary holazainy aminao ny safidy tsara indrindra sy ny fomba hanomezana azy ireo raha tsy mihinana azy izy azy.
Farany, afaka milaza aminao izahay momba ny kefir izay efa fantatrao fa fisotro ronono misy masirasira. Ity dia manana probiotika manampy ny olana amin'ny gastrointestinal. Ary mety ho safidy ho an'ny biby fiompinao izany.
Mazava ho azy, tsy ny rehetra no manaiky azy io angamba angamba fanafody miankina amin'ny fandeferan'ny alikanao ny fisotroana zavatra toy izao (maro no miafara mandoa azy, tsy manokatra vava sns.).
Torohevitra hialana amin'ny fanaintainan'ny vavony
Azo sorohina ny ankamaroan'ny fanaintainan'ny vavony amin'ny alika. Marina fa tsy afaka mifehy foana isika raha manana katsentsitra izy ireo, saingy afaka manara-maso ny alika isika mba tsy hihinan-javatra ivelany. Ilaina hatrany ny manalavitra izany alika mihinana zavatra eny an-dalambe, satria tsy fantatsika raha voaloto izy ireo na ao anaty toe-javatra ratsy, zavatra mety hiteraka tsy fihinanan-kanina na fanapoizinana. Ny fifehezana ny habaka izay hamotsorantsika azy ary ny alika dia zava-dehibe foana.
Etsy ankilany, rehefa mamahana ny alika dia tsara kokoa foana ny tsy miovaova ny sakafo, ny kalitaony, na ny mampazatra azy ireo ny sakafo an-trano hatramin'ny fahazazany raha io karazan-tsakafo io no homentsika foana . Tokony hazava tsara ny sakafo azontsika omena azy, satria ny fihoaram-pefy dia mety hanome azy ireo fanaintainan'ny vavony. Ho fanampin'izay, tsara kokoa hatrany ny manome sakafo azy imbetsaka amin'ny vola kely noho ny indray mandeha monja. Raha te hahalala ny habetsaky ny sakafo atolotra arakaraka ny asany, ny lanjany ary ny taonany, dia tsara kokoa ny manatona ny mpitsabo biby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fanaintainan'ny alika ny vavony
Emilio dia hoy izy:
Salama afaka manampy ahy ianao, marary ny zanako kely hatramin'ny 3, tsy fantatro fa nandoa foana izy, noroahina tsy ho mahazatra ary tsy nihinana ahy, azafady mba ampio aho amin'ny alika vavy dogo Argentina
Valiny tamin'i Emilio
Zoe dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, feno pitsopitsony ary mora azo. MISAOTRA
Mamaly an'i Zoe
Fa maninona no mijanona ny alika rehefa manambady?
Chihuahua, ny alika kely indrindra eto an-tany